Earthwise TC70001 လျှပ်စစ်စွမ်းအားဒါကိုစိုက်ပျိုးမှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Earthwise TC70001 လျှပ်စစ်စွမ်းအားဒါကိုစိုက်ပျိုးမှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Earthwise TC70001 တစ်ဦးခြွေလှေ့ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာမှီတိုင်အောင်ခြောက်သွေ့သောမြေဆီလွှာအားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်. အနည်းငယ်အလေ့အကျင့်နှင့်အတူ, သင်သည်မည်သည့်အခက်အခဲမရှိဘဲထုတ်ကုန်ကိုသုံးနိုင်ပါလိမ့်မည်. အဆိုပါယူနစ်မြတ်သောတန်ခိုးအားကယ်တင်တတ်၏နှငျ့သငျအဖြစ်ကောင်းစွာတောင်ကုန်းဒေသများရှိယူနစ်ကိုသုံးနိုင်သည်. စက်၏လျှပ်လွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဘို့ကြီးစွာသောအထောက်အကူပြုသည်.
မည်သည့်အခက်အခဲရှိလြှငျဒါကြောင့် Customer များတုံ့ပြန်ချက်၏ညာဘက်မျိုးကိုငါပေးမည်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်ကိုရှောင်ကြဉ်လိမ့်မည်. ကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်တင်ပြ reviews သငျသညျအမြိုးမြိုးသောကုန်ပစ္စည်းများအကြောင်းပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်အားငါပေးမည်.
နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်ပိုက်ဆံထုတ်ကုန်များအတွက်တန်ဖိုးဝယ်ယူရန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်. ပို. အရေးကြီးသည်, သငျသညျအကောင်းဆုံးကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုလိုအပ်နေသည်ဟုဒါကိုတတ်နိုင်ဝယ်ယူဖြစ်လိမ့်မည်. ပစ္စည်းဝယ်ယူပြီးနောက်မည်သည့်စိတ်ပျက်သို့မဟုတ်မကျေနပ်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်.
Earthwise TC70001 dual-နှင့်အတူကြွလာ4ဓါးသံမဏိţine. စက်ကကမ်းလှမ်းအဆိုပါဖြတ်တောက်ခြင်းအနက် "8.5 ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာ width ကိုဖြတ်တောက် "11 ရှိပါတယ်. အဆိုပါယူနစ်မှာလည်ပတ် 120 Volts, 60 Hz နဲ့ 8.5 အမ်ပီယာ.
ကုန်ပစ္စည်းများ၏ရှုထောင် 14,7 "x 14.5" x 20.5 "ရှိပါတယ်. ကုန်ပစ္စည်းများ၏အလေးချိန်သည် 26.9 အလေးချိန်ပေါင်.
အင်အားကြီးစက်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်. သို့သော်, ဗဟိုနှင့်အတွင်းစိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းဘီးအကြားကွာဟချက်ကိုသေးငယ်တဲ့အပင်၏အရှုပ်ထွေးကိုတက်ဘို့အခန်းပေးသောအလွန်မြင့်မားသည်.
သင့်အနေဖြင့်ဧရိယာ၌တက်လုပ်ကြံခဲ့ကွောငျးမြက်ပင်များနှင့်အခြားပစ္စည်းပစ္စယဖယ်ရှားရန်နာကျင်လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သွားသင့်တယ်. ထိုဓါးသွားပြောင်းပြန်ဦးတည်လှည်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့ပင်, သင်ဧရိယာဆေးကြောသန့်စင်ရန်ပရိသတ်အကိုဖယ်ရှားလိုသင့်ပါ.
Earthwise အလေးချိန်ရှိအလင်းဖြစ်၏နှင့်သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်တို့နှင့်အတူအကသယ်နိုင်. Earthwise တစ်ဦးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ option ကိုပင်သော်လည်း, သင်တစ်ဦးထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းအတွက်စက်ကိုသုံးမှအမျိုးမျိုးသောကူးသင့်ပါ.
သငျသညျတောင်ကုန်းဒေသများရှိတည်ရှိပြီးနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျ Earthwise TC70001 ကိုသုံးနိုင်သည်. ဒါဟာမဆိုဒုက္ခမရှိဘဲကုန်ပစ္စည်းများကယ်နှုတ်ဖို့အားလုံးကိုအာဏာကိုရှိပါတယ်.
Earthwise TC70001 တစ်ဦးခြွေလှေ့ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာမှီတိုင်အောင်ခြောက်သွေ့သောမြေဆီလွှာအားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်. အနည်းငယ်အလေ့အကျင့်နှင့်အတူ, သင်သည်မည်သည့်အခက်အခဲမရှိဘဲထုတ်ကုန်ကိုသုံးနိုင်ပါလိမ့်မည်.
CHECKOUT Earthwise TC70001 လျှပ်စစ်စွမ်းအားဒါကိုစိုက်ပျိုးရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး, စီးပွားရေး, ဥယျာဉ်, မြက်ခင်း, မွေ, ဒါကို, Tools များ, စိုးရိမ်သိပ္ပံပညာရှင်များပြည်ထောင်စု
← GreenWorks 25022 လျှပ်စစ်စွမ်းအားမြက်ရိတ်စက်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Apple က Macbook Air ကို 13in 2013 မော်ဒယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း →